कार्यहरू सेट गर्नुहोस्
आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् -रोज्नुहोस् कार्यहरू सेट गर्नुहोस्
कार्यहरूको सेट बिवरणमा:
... मा समावेश छ
प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् घुसाउनका लागि जुन समावेश भयो सेट सञ्चालनकर्ता दुई प्लेसहोल्डर सँग. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा सिधा रूपमा
... मा समावेश छैन
यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् घुसाउनका लागि जुन समावेश भएको छैन दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग सेट सञ्चालनकर्ता. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> notin <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा
सेट सञ्चालनकर्ता घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् समावेश गर्नुहोस् दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> owns <?> वा <?> ni <?> सिधा आदेश सञ्झ्यालहरूमा
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् खाली सेट. प्रविष्ट गर्नुहोस् emptyset आदेश सञ्झ्यालहरूमा, तपाईँको कागजातमा खाली सेट घुसाउनका लागि
सेट सञ्चालनकर्ता सँग दुईवटा प्लेसहोल्डर घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् सेटहरूसँग अन्तरक्रिया . त्यही हुन्छ यदि तपाईँले प्रविष्ट गर्नुभयो <?> intersection <?> आदेश सञ्झ्यालहरू
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् union दुईवटा प्लेसहोल्डर सँग सेट सञ्चालनकर्ता. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> union <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा सिधा
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् बिभिन्न सेट सञ्चालनकर्ता. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?> setminus <?> वा <?> bslash <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा
स्ल्यास घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् भागफल सेट दुईवटा प्लेसहोल्डरसँग. प्रविष्ट गर्नुहोस् <?>slash<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा, उही परिणाम पूरा गर्नका लागि ।
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् कार्डिनल सङ्ख्या. तपाईँ उही परिणाम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ प्रविष्ट गरेर aleph आदेश सञ्झ्यालहरूमा
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् जुन सबसेट हो सेट सञ्चालनकर्ताको. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>subset<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा सिधा
सबसेट वा बराबर
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् jजुन सबसेट हो वा समान छ सेट सञ्चालनकर्ता दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>subseteq<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा
सेट सञ्चालनकर्ता घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् जुन सुपरसेट हो र दुई प्लेसहोल्डरहरू. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>supset<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
सुपरसेट वा बराबर
सेट सञ्चालनकर्ता घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् जुन सुपरसेट हो वा समान छ दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. वैकल्पिक रूपमा, तपाईँ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ <?>supseteq<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् not subset सेट सञ्चालनकर्ता दुई प्लेसहोल्डर सँग. यसको सट्टा, तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>nsubset<?>.
सबसेट होइन वा बराबर
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् सबसेट होइन वा समान सेट दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>nsubseteq<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् सुपरसेट होइन सेट सञ्चालनकर्ता दुई प्लेसहोल्डर सँग. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ <?>nsupset<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा
सुपरसेट होइन वा बराबर
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् सुपरसेट वा समान सेट सञ्चालनकर्ता दुई प्लेसहोल्डरहरू सँग होइन. यसको सट्टा तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ <?>nsupseteq<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको सेट
क्यारेक्टर घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको सेट. यसको सट्टा, तपाईँ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ setn आदेश सञ्झ्यालहरूमा
पूर्ण सङ्ख्याहरूको सेट
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् पूर्ण सङ्ख्याहरूको. तपाईँ प्रविष्ट गरेर यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ setz आदेश सञ्झ्यालमा
रेस्नल सङ्ख्याहरूको सेट
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् रेस्नल सङ्ख्याहरूको सेटका लागि. तपाईँ यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिधा प्रविष्ट गरेर setq आदेश सञ्झ्यालहरूमा
रियल सङ्ख्याहरूको सेट
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् वास्तविक सङ्ख्याहरूको सेटका लागि. यसको सट्टा, तपाईँ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ setr आदेश सञ्झ्यालहरूमा
जटिल सङ्ख्याहरूको सेट
घुसाउनका लागि यो प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस् जटिल सङ्ख्याहरूका लागि. तपाईँ प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ setc आदेश सञ्झ्यालमा
मानहरू र आदेशहरू बीचमा खाली स्थानहरू (भागहरू) छोड्न निश्चित हुनुहोस् जब तिनीहरूलाई आदेश सञ्झ्यालहरूमा म्यानुअली प्रविष्ट गरेको बेला. यसले यो निश्चित गर्दछ कि सहि बनावट पूरा गरिन्छ ।
Title is: कार्यहरू सेट गर्नुहोस्